10 Best Places ileta na South Italy | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best Places ileta na South Italy
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/02/2021)
The ọkụ ihu igwe bụ bụghị n'elu ma. A ka nwere oge na a ezigbo ihe mere ileta South Italy a ọnwa! South Italy has some amazing offerings. The Best Places ileta na South Italy agụnye; mara mma erukwa nke ịrịba ama coastline, hụ zuru okè osimiri, maa mma agwaetiti, na plethora nke obodo na obodo nta. Ọ bụ ike warara ndepụta anyị ala dị nnọọ 10, ma lee ndị a 10 ebe kasị mma ileta na South Italy.
Gịnị bụ a njem Italy enweghị ịga na Amalfi Coast? Nke a akpan akpan n'ógbè Southern Italy bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma na ụwa ma ama! Ndinyanade mbịne si Naples na Salerno, na Amalfi n'ụsọ oké osimiri ahụ na-enye ịrịba ama mma, ọmarịcha obodo mmakọ ugwu, na ụfọdụ na-akpali akụkọ ihe mere eme na saịtị.
Nke a na-echebe obodo atụmatụ ụfọdụ idyllic ala gbara osimiri okirikiri obodo ndị dị otú ahụ dị ka Amalfi, Erchie, Mụaka, na Positano - obodo ndị a nwere usoro nke ọtụtụ agba ụlọ na tojupụtara megide n'akụkụ ugwu ma nye ohere foto zuru oke.
Ọzọkwa, saịtị ndị dị otú ahụ dị ka Villa Rufolo na Ravello enye unrivaled echiche gafee Oké Osimiri Mediterenian.
Sorrento nwere ma eji enyere ndụ aka na njem nleta chọta na-akasi obi nakwa dị ka ihe pụrụ iche na elu-ọgwụgwụ ochie maka ire na ochie obodo. A ugbo doo si ebe a iji n'agwaetiti nke Capri, na ọ bụ oké jumping anya mgbe n'ihi na Pompeii. Otú ọ dị, A maara Sorrento maka ya magburu onwe Gọọmet nri, pụtara n'elu ugwu n'ebe-obibi- (ezie na ọ dịghị osimiri), na pụtara echiche nke Ugwu Vesuvius gbawara.
Bologna ka Pompei Ụgbọ oloko
Nke a ochie obodo positioned tinyere nkume coastline nke Oké Osimiri Mediterenian. Ya ritzy ọdụ ụgbọ mmiri bụ otu n'ime n'elu hotspots na Italy. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ ebe a n'oge okpomọkụ ị nwere ike na akwụkwọ ọma tupu iji nwetara ị họọrọ hotel dị ka ụlọ akwụkwọ elu Ọsọ. Dị ka anyị na-eru nso ọgwụgwụ nke na-ekpo ọkụ oge, ị nwere ike na ụfọdụ chi na ikpeazụ-nkeji ntinye akwụkwọ!
Ụfọdụ jụụ akụkọ ihe mere eme, Paestum bụ obodo na Italian ala, ma ọ tọrọ ntọala site na ndị Grik oge ochie mgbe ha na-achịkwa nke akụkụ a nke Italy! Mgbe ahụ, ọ maara dị ka Poseidonia mgbe chi nke oké osimiri.
The Greek ije naanị bụ uru a nleta otú ijide n'aka na-etinye na n'ime gị njegasi na mgbakwunye na ịga na atọ ọma chebere Greek n'ụlọ nsọ na i nwere na-ahụ. Ihe odide kasị ochie e wuru banyere 550BC (enye ma ọ bụ iri a afọ) na na-na Temple nke Hera nke bụ ịtụnanya.
5. Best Places ileta na South Italy: Naples
Naples, ma ọ bụ Napoli, na-adabere na ihe asụsụ, bụ nke atọ kasị ukwuu na obodo Italy. Ikwu eziokwu, e nwere ụfọdụ dị megidere echiche na akụkụ a nke South Italy. Nye ụfọdụ, o buru ibu, ruru unyi, mmebi iwu, na ịda, na ndị ọzọ, ọ bụ edgy na ikuku. Ihe ọ bụla ahuwo Nnam ntutu isi gị azụ, anyị maa? One thing is for sure though. Nke a gbara osimiri okirikiri Southern obodo nwere ya àgwà!
ọtụtụ ọkacha mmasị Italian oriri sitere na Naples na gbara ya gburugburu ebe dị otú ahụ dị ka Pizza, na spaghetti. A efere na-kpọrọ ebe a na-emekarị Njirimara ọhụrụ, mpaghara toro Efrata. Njem nkiri na Naples agụnye a nnukwu ochie nnukwu ụlọ, New Castle, nakwa dị ka seaside wusiri ike nke Castel del Ovo. Obodo ahụ dịkwa n’akụkụ Vesuvius, naanị ifịk ugwu mgbawa na European Afrika.
6. Best Places ileta na South Italy: Alberobello
The obodo nke Alberobello pụrụ iche na ọ bụ ihe kasị mma chekwara atụ nke Trulli ije ka ike dị na niile nke Italy (ọma, otú ahụ ka m gwara).
Homes wuru na Trulli style na-ji conical nkume n'elu ụlọ na-enweghị iji ngwa agha (ezie, M na-na-ewu mere adịghị aguputa m na na). Ndị kasị ochie n'ebe obibi na-akpa si narị afọ nke 14 na kpam kpam pụtara, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime kwesịrị-ahụ na mara mma na obodo nta na Southern Italy ileta.
Naples na Monopoli Ụgbọ oloko
7. Best Places ileta na South Italy: Tropea
Lee, M na-adọ aka ná ntị gị tupu. The foto ohere n'ebe a na-ara. Kpachara anya ka ị ghara atụ uche si na ata ihe! The obodo ochie mara mma nke Tropea na perched n'elu ụfọdụ n'oké ọnụ ọnụ ugwu na gafee okporo ụzọ si a warara aja beach, ya kwuru na a tọrọ ntọala site na Hercules onwe ya.
Ọ bụrụ na ị na- nlegharị anya, e nwere abụọ ọmarịcha ụka na Tropea kwa, na Santa Maria del Isola bụ a ochie ụka na e wuru ke isuo ọ bụ ezie na ọtụtụ afọ nke siltation emeela a n'ala mmiri na-akpụ n'etiti agwaetiti na Chile. Nke ọzọ bụ na katidral; ya nwere ihe abụọ unexploded bombs-akpa si WW2 ọdụ dị nnọọ ná mpụga nke ụka ụzọ. Obodo kwere ụlọ ahụ na-echebe site na nchebe senti ka na-ele gị nzọụkwụ!
The ụka naanị ka a otu n'ime ndị kasị mara mma obodo na Southern Italy. Ị ga-hụrụ ya n'anya!
Vibo Marina ka Tropea Ụgbọ oloko
Catanzaro ka Tropea Ụgbọ oloko
Cosenza ka Tropea Ụgbọ oloko
Lamezia Terme ka Tropea Ụgbọ oloko
8. Best Places ileta na South Italy: Capri
Nyochawa a obere àgwàetiti, Capri nwere a ọmarịcha obodo na marina na i nwere inyocha. Àgwàetiti ahụ dum bụ ọgaranya akụkọ ihe mere eme na akụkọ ifo na otu ọmarịcha ntụpọ i nwere ileta mgbe na mpaghara.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe na-ahụ, The home Eze Ukwu Rom bụ Tiberius (Villa Jovis) ka otu n'ime ndị isi tụrụ ịhụ n'àgwàetiti ahụ na otú a ka Blue Grotto. The waterfront ọgba bụ naanị inweta site ụgbọ mmiri na naanị mgbe e nwere mma tides (otú a ga-akwadebe maka cancellations).
9. Best Places ileta na South Italy: Pompeii na Herculaneum
Pompeii na Herculaneum abụọ Roman obodo na obodo nta na-obliterated mgbe Ugwu Vesuvius gbawara gbawara ụzọ niile azụ ke 79 AD.
Eleghị anya ndị kasị ama nke abụọ bụ obodo nke Pompeii, nke ị nwere ike ugbu a na-awagharị gburugburu na ịchọpụta mgbe ị na-ebe. ihe jogburu onwe 3,000 ndị mmadụ n'iyi na obodo, ma na-ekpo ọkụ ash nadigh anwu anwu mkpọmkpọ ebe n'ime ihe ọ bụ taa. ike dọrọ aka ná ntị, ya nwere ike inwe ezigbo ọrụ n'aka ebe a, ka na-eme atụmatụ ya na-echeta gị nwere ike iji kwụ n'ahịrị maka tiketi ịbanye.
Oh, nwekwara obodo dị nso nke Herculaneum bụ nta ma a bara ọgaranya district na-enye ihe atụ nke otú ndị Rom bara ọgaranya mgbe ojeghariri. Jide n'aka na ileta Herculaneum Archaeological Area ma ọ bụrụ na ị na-a akụkọ ihe mere eme buff!
Bari ka Pompei Ụgbọ oloko
10. Best Places ileta na South Italy: Aeolian Islands
Ikpeazụ na anyị ndepụta nke Best Places ileta na South Italy. The Aeolian Islands! Ha na-mara dị ka Hawaii nke Italy. Ọ bụ a eriri nke agwaetiti dị n'ebe ugwu nke Sicily, na na ọ bụ enweghị isi na ọmarịcha. Dị ka ịtụnanya dị ka o nwere ike ịbụ, o siri ike na onye ọ bụla maara banyere ya,. Ma ndị ahụ ndị na-na-abịa azụ. N'ihi na ha maara na ha ga-enwe ebe niile onwe-ha.
Ịkwụ ụgwọ ụlọ scooters ka zip gburugburu mara mma nwa osimiri. Dara aperitivo na Pollara. Boating gburugburu gburugburu agwaetiti nke Stromboli, Panarea, na Lipari. Inweta nke uzuoku na sọlfọ mmiri spas na Vulcano. The Greek vibes (ọ na anya - agwaetiti na-aha ya bụ n'ihi Aeolus, chi nke ifufe, site Greek biri). Salt eroded ụlọ awụfu ruo n'ikpere mmiri. Na mmetụta dị ka ị na-na na a nnukwu na nzuzo na ị na wanna òkè na ndị ị hụrụ n'anya!
Insider n'ọnụ: njem ebe a n'etiti Easter-October na Book n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ileta na August!
Njikere abịa akpa gị maka South nke Italy njem? Mgbe akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi na Save A Train n'ime nkeji. Ọ dịghị mmezi ụgwọ, nweghị nsogbu oge, dị nnọọ fun!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Places ileta na South Italy” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#italyholiday #SouthItaly #SummerinItaly #TrainTravelItaly italyvacation ụgbọ okporo ígwè njem